Maorisy dia namarana ny quarantine ho an'ireo mpizahatany voahidy vaksiny nankatoavina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Maorisy » Maorisy dia namarana ny quarantine ho an'ireo mpizahatany voahidy vaksiny nankatoavina
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Maorisy • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Maorisy dia namarana ny quarantine ho an'ireo mpizahatany voahosotra tamin'ny vaksinin'ny COVID-19 valo nahazo fankatoavana
Ny areti-mandringana dia nahatonga ny toekarem-pirenena. Nandritra ny taona ara-bola farany, nilentika 15% ny harin-karena faobe GDP. Ny asa fahefatra rehetra any Maorisy dia misy ifandraisany amin'ny fizahan-tany, miaraka amin'ny anjarany fa ny GDP dia mahatratra 24%.
Nanidy tanteraka ny sisintaniny amin'ireo mpizahatany vahiny i Maurice tamin'ny nanombohan'ny valanaretina tamin'ny martsa 2020.
Nanokatra ny sisin-taniny i Maorisy tamin'ny 15 Jolay 2021, fa ny vazaha vaovao vao tonga dia tsy maintsy iharan'ny quarantine 14 andro.
Sputnik V vita Rosiana dia iray amin'ireo vaksinina valo miady amin'ny coronavirus nankatoavina teto amin'ny nosy.
Nanambara ny manampahefana Maorisy fa nanomboka tamin'ny 1 Oktobra dia nesorina daholo ny fameperana ny hetsiky ny mpizahatany voarohirohy tamin'ny iray amin'ireo vaksiny miisa valo hanoherana ny coronavirus.
Ny fari-tanin'i Maorisy nakatona tanteraka tamin'ireo mpizahatany vahiny tamin'ny nanombohan'ny areti-mandringana tamin'ny martsa 2020. Nisokatra tamin'ny 15 jolay 2021 izy ireo saingy, ireo karana vaovao dia voatery niharam-boina 14 andro. Amin'izao fotoana izao dia nilamina ny fepetra fijanonana ho an'ireo mpizahatany vahiny voarohirohy tamin'ny vaksinim-pahefana nankatoavin'ny tompon'andraikitra ao an-toerana.
Raha ny filazan'ny solontenan'ny Masoivoho Rosiana any Maorisy, Sputnik V vita Rosiana dia anisan'ny vaksinin'ny COVID-19 valo nekena teto amin'ny nosy.
Rosiana mpizahatany no niditra an-tsokosoko niaraka tamin'i Sputnik V tonga ao Maorisy Tsy mila mandinika quarantine manomboka anio ary afaka mihetsika malalaka momba ny faritanin'ity nosy ity, hoy ny diplaomaty.
"Talohan'izay dia tsy maintsy nandany quarantine roa herinandro tao amin'ny trano fandraisam-bahiny izy ireo," hoy izy, ary antenaina fa hiverina ny sidina mivantana eo anelanelan'ny Maurice sy ny tanàna Rosiana ato ho ato.
Rosiana nataon'olombelona Sputnik V vaksinina no be mpampiasa ao Maorisy. Tonga teto an-toerana ny andiany voalohany tamin'ny 30 Jona. Nanomboka tamin'ny 12 Jolay, nampiasaina tamin'ny famoahana vaksinim-pirenena Mauritius niaraka tamin'ny tifitra hafa ny Sputnik V.
I Maorisy dia iray amin'ireo mpitarika any Afrika raha ny isan'ny olona voan'ny virus coronavirus no resahina. Doka mitifitra 1.63 tapitrisa tapitrisa manohitra ny COVID-19 no nampiasaina teto amin'ny nosy, olona 788,000 na 62.2% ny mponina no nahavita ny làlana fanaovam-baksiny feno.
Ny areti-mandringana dia nahatonga ny toekarem-pirenena. Nandritra ny taom-piasana farany, nilentika 15% ny harin-karena GDP. Ny asa fahefatra rehetra any Maorisy dia misy ifandraisany amin'ny fizahan-tany, miaraka amin'ny anjarany fa ny GDP dia mahatratra 24%. Tanjon'ny governemanta ny hisarika mpizahatany manodidina ny 650,000 any Maorisy ao anatin'ny 12 volana ho avy.